» गरिब लाई खान दिन कस्ले रोक्छ हेरौं !भन्दै साझा पार्टिले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति,खुल्ला च्यालेन्ज, ताली या गाली? गरिब लाई खान दिन कस्ले रोक्छ हेरौं !भन्दै साझा पार्टिले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति,खुल्ला च्यालेन्ज, ताली या गाली? – हाम्रो खबर
गरिब लाई खान दिन कस्ले रोक्छ हेरौं !भन्दै साझा पार्टिले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति,खुल्ला च्यालेन्ज, ताली या गाली?
काठमाण्डौं । हाम्रो टिम नेपालले सबैको सहयोगमा लकडाउन देखि खुल्ला मन्चको सडकमा गरिबलाई खाना खुवाउदै आएको सबैलाई थाहा नै छ तर हिजो मात्र काठमाडौ महानगर पालिकाले हाम्रो बेइज्जत भएको भन्दै खाना नबाँड्न चेतावनी दिएको थियो ।
यो सँगै सबैले विरोध गर्दै आएका छन् । साझा पार्टिले प्रेश नोट जारी गर्दै कसले रोक्दो रहेछ हेरौ भन्दै सरकारलाई खुल्ला च्यालेन्ज गरेको छ ।